Tartanka iyo Tartamayaasha Ward 6
Waxaan bar-kulanka Facebook ku arkay labo farriin oo maqal iyo muuqaalba leh kuwaasoo ka yimid Mudane Cabdi Warsame. Mid waxaa laga duubay xafladdii soo dhaweynta Farmaajo, midna waxaa laga duubay madal ay dad isugu yimaadeen. Dhanka kalena waxaan ogaaday in uu Mudane Maxamud Nuur u tartamayo isla kursiga Degmada Ward 6. Waxaa ii muuqato inaynu weli ku jirno tiih siyaasadeed iyo mid cilmi-nafsiba. Labo qodob bal aan is dul taago.
Kow, mudane Warsame wuxuu dooddiisa sal uga dhigay ganacsade carab ah ayaa igu hayo dagaal uu ii soo adeegsanayo musharrax kale (proxy). Markii aan dhageystay khudbaddiisa, su’aalahan ayaa i hor yimid: “Sidee buu ganacsade Sabri ku mutay inuu noqdo mudnaanta tartanka doorasho ee Cabdi Warsame? Dhanka kale Mudane Warsame ma ku baraarugsan yahay in xilka uusan u hayn Soomaalida keliya ee waxaa kaloo Degmada Ward 6 deggan jaalliyado kale kuwaasoo qabo baahi ka duwan dhisidda rug ganacsi? Jaalliyadahaas muxuu u qorsheeyay mudanuhu?”
Run ahaantii, jaalliyadda Soomaaliyeed culeysyo badan baa ka soo wajahay xukuumadda Trump; dhallinyaro deggan Ward 6 baa beylah ah; xaafadda Cedar waxaa jiro ciriiri dhanka goobaha la dhigto gawaarida iyadoo deganayaasha xaafaddaas ay jeclaan lahaayeen in dawladda hoose ay rujiso tiirarka lacagta lagu rido ee ku teedsan xaafadda Cedar si dadku u helaan nafis xagga baarkinka ah; iyo culeysyo kale oo baahsan. Waxa keliya ee laga filan karay Mudane Warsame waa inuu noqdo halyeey u taagan baahiyaha ay qabaan kumanaanka xilka u dhiibtay. Waxaa sidoo kale looga fadhiyay inuu noqdo cod si joogto ah u difaaco Muslimiinta, qaxootiga, magan-gelyo-doonka, faqiirka dulman, iyo jaalliyadaha kale ee ku nool Degmada Ward 6.
Waase ayaan-darro in uu si bareer ah u soo dhoodhoobo sheeko (concocted narrative) uu ku beer-laxawsanayo Soomaalida. Sheekada Sabri ee uu Mudane Warsame ku celcelinayo runtii waxaa iiga dhex muuqatay hab-dhaqankii silloonaa ee laga dhaxlay dagaal-oogayaashii Soomaaliya, hab-dhaqan ka mid noqday cilmi-nafsiga qaarkeenna iyagoo damco inay xukun ku raadsadaan xaalad-abuur iyo cabsi-gelin. Waxayna isticmaalaan xeelado gurracan iyagoo dadka ka soo galayo meesha ay ka nugul yihiin. Sheekada Sabri waxay tusaale u tahay xeeladahan iyo shaxda loo adeegsanayo Soomaalida qalbiga fiican (manipulation). Waxa aanse filayay in Mudane Warsame uu jaalliyadda Soomaalida uga turayo hab-dhaqankaas gurracan.
Waa ayba dhaammi laheyd haddii ay xitaa dooddiisu ahaan laheyd doorashadaan waxaa tartamayo Sabri iyo Soomaalida. Mayee wuxuu mudanuhu hoos uga soo degay baahidii jaalliyadda isagoo ku jaan-gooyay in doorashadu ay tahay mid u dhaxeyso Sabri iyo Cabdi Warsame. Labada muuqaal ee uu soo duubayba sidaas ayuu ku nuuxnuuxsaday. Halkaas waxaa ka furantay daaqad laga qiyaas qaadan karo waxa gubayo mudanaha—waxaana isla markaa meesha ka dhalaneyso su’aasha ah: Cabdi Warsame maxaa gubayo oo wado? Ma kursigiisa ayuu ka gubanayaa mise danta dadka uu matalo ee Ward 6?
Bal qodobka labaad ii gudbi. Mudane Maxamuud Nuur wuxuu isaguna sheegtay inuu yahay musharrax u taagan isla kursiga Ward 6 ee uu haatan ku fadhiyo Cabdi Warsame. Waan ku qaldanaan karaa, hayeeshee waxaan arkaa in go’aanka musharraxnimo ee Mudane Nuur aysan xikmad ku jirin. Tartanku waa caafimaad, laakiin tartan ah hadda ayaan iska damcay (on a whim) waxaa ku sii kala fogaanayo jaalliyadda Soomaalida. Jaalliyadda oo laga ilaaliyo kala fogaansho iyo towfiiq-xumo ayaa ka muhiimsan kursiga.
Haddii aan soo gunaanado, yoolku yuusan noqon kursiga la kala bursanayo. Yoolku ha noqdo mid kursi ka shisheeyo. Ha noqdo jihaynta iyo dhisidda jaalliyadda Soomaalida. Runtii waxaa aqoonyahanka jaalliyadda saaran masuuliyad ah wacyi-gelinta jaalliyadda iyo inay baadi-goobaan nidaam caafimaad qabo oo lagula xisaabtamo siyaasiga iyo hoggaamiyaha iyadoon jaalliyadda la kala dilin, jahwareerna la abuurin.
Cabdullaahi Janno waa qoraa deggan Twin Cities.
Waxaa lagala xiriiri karaa Claahijanno@gmail.com ama www.facebook.com/AbdullahiJanno1/.
Message from Secretary of State Tillerson to Somalia President Mohamed A. Farmajo